Abaphakeli beplastiki Tyep kanye nefektri - China Abakhiqizi bePlastiki Tyep
IP66 Plastic ebiyelwe
IP55 Shintsha & Isokhethi
Igobolondo (w / o Izesekeli)
Amaswishi & Izikhoxe
IP66 Shintsha & Izikhoxe
Ukushintshwa Namasokhethi okusha kwe-IP66
Vula Uhlobo Lwekhava
Thayipha Izesekeli Zomsebenzi ezingama-45
Thayipha Izesekeli Zomsebenzi eziyi-128
Thayipha izikhoxe ezingama-118
Thayipha amamojula angama-50
Thayipha amamojula angama-32
I-AD2GEE IP66 Ukufakwa Okungenalutho
Izesekeli Zesokhethi ZaseJalimane ze-ADL-01SR
IP55 Series Manzi Surface Shintsha + BS Socket + Sch ...
Ukufakwa Okungenalutho kwe-IP66
Isokhethi Lethebula le-FZ528
Isokhethi sethebula le-FZ502
I-XK-250 Floor Socket Outlet
Usayizi wePhaneli: 250x250mm
Usayizi webhokisi lesisekelo: 200 x 200 x 70mm
Usayizi wePhaneli: 328x230.5mm
Usayizi webhokisi lesisekelo: 279.5x189.5x95mm
Usayizi wePhaneli: 245x225mm
Usayizi webhokisi lesisekelo: 225x189.5x70mm
Abasebenzi bangaba eceleni
Ucingo: 0086- (0) 577-62797750 / 60/80
Ifekisi: 0086- (0) 577-62797770
Umhlahlandlela ophelele wokulinganiswa kwe-IP okungangenwa manzi - i-IP44, i-IP54, i-IP55, i-IP65, i-IP66, i-IPX4, i-IPX5, i-IPX7 Kungenzeka ukuthi uhlangabezane nemikhiqizo enophawu lwayo noma emaphaketheni ayo, njenge-IP44, IP54, IP55 noma enye efana nayo. Kepha uyazi ukuthi kusho ukuthini lokhu? Yebo, le yikhodi yamazwe omhlaba ...
Sonke sibona izinkomba kumadivayisi angangeni manzi, amadivayisi angavimbi amanzi namadivayisi aphehla amanzi aphonswa kwimikhiqizo ye-elekthronikhi. Umbuzo omkhulu uthi: Uyini umehluko? Kunezindatshana eziningi ezibhaliwe ngalesi sihloko, kepha sicabange ukuthi sizophonsa amasenti ethu amabili futhi ...
Iyini Isokhethi Saphansi? Isokhethi laphansi liyi-plug receptor etholakala phansi. Lolu hlobo lwesokhethi lungenziwa ngezinhlobonhlobo zamaplagi, kepha luvame ukusetshenziselwa ukuxhuma ngogesi, ucingo noma ikhebula. Ukusetshenziswa kwezisekelo eziphansi kulawulwa kakhulu ngamakhodi wokwakha kokuningi ...
© Copyright - 2010-20122: Wonke Amalungelo Agodliwe.